VaMnangagwa Vanoti Varimi Vatema Vanokwanisa Kuita Mushandirapamwe neVachena
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnagwangwa vanoti varimi vechitema nevechichena vanofanirwa kushanda pamwe muminda kuti munyika muve nechikafu chinokwana vanhu vose.
Vachitaura papurazi reDundrennan riri pedyo neChinhoyi nemusi weChipiri VaMnangagwa vakati hurumende yakabvuma zviri pamutemo kuti varimi vechitema vakasununguka kushanda nevarimi vechichena kuti varime zvekudya zvinogutsa nyika yose. Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vakambotaura kuti varungu vose vainge vachishanda nevachena vaizotorerwa mapurazi.
VaMnangagwa vanoti kushanda pamwechete kunoumba hukama hwakakomba zvinoita kuti pave negoho rakanaka zvinozopa mari kunyika iyo iri kutsvakwa negurukota rezvehupfumi VaPatrick Chinamasa.
VaMnangagwa avo vanova sachigaro wekomiti yedare remakurukota rinoona nezvekuwanikwa kwezvekudya munyika kana kuti Cabinet Committee on Food Security and Nutrition vanoenderera mberi vachiti varimi vechitema vashandise midziyo yekurimisa yechizvinozvino.
VaMnangagwa vanoti midziyo yechizvino zvino inoita kuti varimi varime nzvimbo yakakura munguva shoma, kudyara nekukohwa nenguva.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe VaTafadzwa Musarara vanoti varimi vanofanirwa kurima gorosi rakawanda kuti munyika muve nechingwa chinokwana uye kuti vasatenge Furawa kunze kwenyika izvo zvinoda mari yakawanda.
VaMnangagwa vanoti hurumende yakawana mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu emadhora kubva kune mabhanga anokweretesa mari pamwe nemakambani akazvimiririra ane chekuita nezvirimwa.
Mahekita anosvika zviuru mazana mana zvakasarudzwa kuti zvirimwe chibage chinofanirwa kusvika matani mamiriyoni maviri ayo anokwana nyika yose pagore.